यो आर्थिक बर्ष अर्थतन्त्रका लागि उत्साहप्रद रहेन् । कोभिडको त्रासले जति बिगार्छ सोचेका थियौ, त्यति बिगारेको थिएन । तर, कोभिड शान्त हुँदै गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ की भन्ने अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेको छैन् । केही सुचकां…
शेखर गोल्छा स्थानिय निर्वाचन लगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेटोल डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैया मुल्य वृद्धि गर्यो । त्यसको दुइ दिन पछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मुल्यसूचि अनुसार यो मुल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेटोलमा …
कुमार दाहाल १. विदा अधिकारको कुरा होइन । सुविधा मात्र हो ।कर्मचारीले चौबीसै घण्टा तोकिएको काम गर्नुपर्छ र विदालाई अनुकूल रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यो निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। २. निजाम…
कृष्णहरि बास्कोटा बजेटको सम्बैधानिक र कानूनी व्यबस्थाः नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार आगामी आ.ब. २०७९।८० को लागि नेपाल सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट जारी गर्नुपर्छ । यस्तो बजेट जारी गर्नुपूर्व प्रिबजे…
अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैनः अग्रवाल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो …
पवन गोल्याण निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्न एकदमै आवश्यकता छ । नेपालका गार्मेन्ट लगायत अन्य उद्योगहरुमा छिमेकी देशबाट श्रमिक ल्याएर भन्दा पनि नेपालीलाई नै काम दिनु पर्यो । नेपाली श्रमिकल…
आर्थिक बृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुनेः हालै विश्व बैकले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छैन, संकट आउनेवाला पनि छैन् भन्ने टिप्पणी गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यसपछि नेपाल श्रीलंकाकै स्थितिमा पुगिसक्यो भनी ठोकुवा गर्नेहरु मौ…
शेखर गोल्छा । विश्वले नै एकैसाथ गर्नु परेकोे त्रास, अनिश्चितता र महामारीसंगको संघर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ । नेपालीले आधुनिक इतिहासमा यस्तो महामारी पहिले कहिल्लै भोग्नुपरेको थिएन् । पहिलोपटक धेरै समयका ला…
महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता, देशको अर्थतन्त्रको सन्र्दभमा जे जति रुपमा समग्र सञ्चार माध्यम, सोसाइटी, सामाजिक सञ्जाल, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट जुन किसिमको सम्…